Iwo akanakisa akachipa malaptop - Isu tinokubatsira kuchengetedza
Asingasviki € 500
Asingasviki € 1000
Kubhejera isingasviki € 1000
Ndeipi laptop yekutenga?
Hapana anoshanda sisitimu
Yakanakisa yakachipa laptops
Isu tinoenzanisa uye ongorora yakachipa malaptops zvinoenderana neakananga maitiro kuitira kuti iwe uwane akanakisa mumhando uye mutengo.
Madhiri Anhasi paMalaptop Akachipa
Kutenga imwe yemalaptops yakachipa kwakafanana nekutenga mota. Iwe unofanirwa kuita tsvagiridzo yako uye kapfumbamwe kubva pagumi iwe unofanirwa "kupa iyo spin" usati wazvipira kuenda nayo kumba, sezvo izvo zvakafanira kumuvakidzani wako zvingave zvisina kukukodzera iwe. Usati wambofunga nezve modhi yaungade, iwe unofanirwa kufunga nezve mutengo wayo uye bhajeti yaunayo..
Kuti usununguke, isu takaita chikamu chakaomesesa chebasa racho, tichiunganidza muchinyorwa chino yakanakisa yakachipa laptops. Isu takasanganisira modhi yezvese zvinodiwa, saka zvisinei kuti chii chauchashandisei, iwe zvechokwadi uchawana yakakunakira iwe.
Kana iwe uchiri kuziva kuti ndeipi laptop yakachipa yaunoda, pazasi iwe une akatevedzana ekutenga madhairekitori anokubatsira iwe kusarudza zvichibva pane zvauri kutsvaga:
Laptops zvinoenderana nemutengo
Best laptop quality mutengo
Laptop yemitambo isingasviki 1000 euros
Laptops isingasviki 1000 euros
Laptops isingasviki 500 euros
Laptops ne processor
Linux laptop. Ndeipi yekutenga?
Laptops ine SSD
2-in-1 malaptops anoshandurwa
Laptops isina operating system
Laptops zvinoenderana nescreen
Laptops maererano nekushandiswa kwaunoda kupa
Laptop ye graphic dhizaini
Inotakurika yekugadzirisa vhidhiyo
Nebhajeti ye500 uye € 1.000, kuenzanisa uku kuchakubatsira iwe kusarudza zvinoenderana nezvaunoda.
Kana usina class ndeipi yekutenga, takuita iwe nongedzo yakazara saka unogona kusarudza ndeipi laptop yekutenga nekudzvanya pane link.
Iwo akanakisa akachipa malaptop e2021
Zvakanaka, pasina imwezve ado, ngatitangei neakanakisa akachipa malaptop e2021. Kuti tiite rondedzero, hatina kungofunga nezvemutengo, asiwo dhizaini, hunyanzvi hwekuita nezvimwe zvakawanda.
Tarisa pane chipo chikuru chatakawana zvishoma pazasi nekuti iyi modhi inofanirwa kutariswa, nekuda kweichi chikonzero takaisa pakutanga. Ibhuku rakatetepa uye rakanyarara. Inogona kushandiswa zvakanyanya seyechipiri laptop kana selaptop yebasa yevadzidzi nenyanzvi. Iwe unowana chaunobhadharira, saka zviri nani usatarisire kukurumidza kana usability. Nekudaro, kunyangwe iri iyo yakachipa laptop pane iyi runyorwa, inorongedza zvimwe zvinokatyamadza maficha.
Iyo inonyanya kushamisa ndeye 64 GB yayo, ichi chinhu chikuru chinoshaikwa nemalaptops mazhinji atakaisa mune ino runyorwa. Iwe unofanirwa kufunga nezve CHUWI HeroBook semhinduro yeMicrosoft kuChromebook. Kana iwe usingawirirane neChrome's system yekushandisa uye unoshandiswa kushandisa Windows 10, saka iyi ndeimwe yeakanakisa akachipa malaptops kubva kuMicrosoft.
Iyi komputa ingave yakakodzera chaizvo kushandiswa kwakareruka mazuva ese: tsvaga paInternet, shandisa Microsoft Office (seShoko neExcel), dzora uye gadzirisa masocial network, shandisa masevhisi ekutepfenyura mavhidhiyo ...)
Ndiyo imwe yemalaptops akachipa pane iyi runyorwa, asi hazvireve kuti haina simba. Zvekushandisa zvemazuva ese zvinokupa iwe a Hupenyu hurefu hwebhatiri, nekukurumidza kugadzirisa Uye iwe unogona kunyange kutamba mitambo yemavhidhiyo yakapfava (kune iyo yakanyanya kuoma inowira pfupi asi kana iwe uchitsvaga laptop yemwana, iyi isarudzo huru, vimba neni).
Muchiitiko chedu, chikuru chinokanganisa chelaptop iyi ndechekuti haina DVD drive. Nekudaro, izvi zvave kuita tsika yemalaptops mumutengo uyu, saka usarege izvi zvichikutadzisa, sezvo software zhinji yauchazoda, seMicrosoft Office, inogona kutengwa sekudhawunirodha. , hapana dhisiki. Kunyangwe, kana izvi zviri izvo zvinokukanganisa iwe, unogona kusarudza kutenga yekunze DVD drive isingasviki makumi matatu emaeuro.
Kunze kwaizvozvo, nekuda kwehukuru hukuru hwechidzitiro chayo, kunaka kwayo uye hunhu hwambotaurwa, iyi ilaptop yakanaka kune yakaomesesa mabhajeti.
Iyo Asus VivoBook inogona kudaro imwe yeakanakisa yakachipa malaptop ekushandisa kwemazuva ese pane iyi runyorwa. Yakava mutengesi wepamusoro paAmazon, uye kana ichienzaniswa nemamwe malaptops mumutengo wayo, tinogona kuona zviri nyore kuti sei.
Iwo maficha atapfupisa mune yapfuura runyorwa akajairika kune ese-terrain laptop, saka chii chinoita kuti ive yakakosha? Zvakanaka, Asus akasarudza kupa isingarondeke kukosha kwemari uye HD kuratidza nayo Yakabatanidzwa giraidhi kadhi Intel HD Graphics 620 uye v2 Dolby Yepamberi Audio kuti iwe ugone kuona TV kana bhaisikopo rine ese mhando yawaitarisira.
Iyi ndiyo mhando yelaptop iyo iwe unogona kushandisa zvese kubasa uye multimedia. Kunyangwe isiri iyo diki kana yakanyanya kutakurika, ichiri nyore kutora kubva pamba kuenda kunze uye kubva kunze kuenda kumba, shanda pairi Windows 10, tarisa mafirimu uye terevhizheni kana kutotamba mitambo yemavhidhiyo iri nyore. Kune zvazvinoita, ndinosimbisa kuti ndizvo imwe yeakanakisa laptops mune ino mutengo renji pamusika.
Laptop iyi yakachipa zvishoma pane mamwe anokurudzirwa, asi isu tafunga kuisanganisira zvakadaro nekuti mune mamwe bhajeti madhairekitori aita kuti asvike pamusoro penzvimbo, kunyangwe kutanga paPC Advisor runyorwa rweakanakisa anodhura malaptops a2021. Saka, zvakakosha here kubhadhara iyo mari yakawedzerwa kana kuti yakakosha neiyi modhi?
Isu takasanganisira iyo HP 14 pane yedu runyorwa rweakanakisa bhajeti-inoshamwaridzika malaptop e2021 nekuti inogona kutora chero chaunokanda pairi (kunze kwezvidhinha) uye zvishoma.
Inobhururuka nekukasira kuburikidza ese ekutanga basa maapplication akadai seMicrosoft Office, kubhurawuza kwewebhu zvakazara, kutenderera masevhisi masevhisi uye inotokubvumidza iwe kutamba mitambo yemavhidhiyo (kunyangwe isu tisingafaniri kukanganwa kuti haina kugadzirirwa izvozvo, inononoka uye zvishoma. iwo magirafu ndeepakati-akaderera mhando).
Pamusoro peizvi zvese, tinozvifunga imwe yeakanakisa laptops mumutengo wayo, sezvo uchigona kuiwana isingasviki mazana matatu emadhora.
Kuvapo kweLenovo Ideapad pane iyi rondedzero kunoshamisa. Notibhuku iyi ine a inotenderera LED yekubata sikirini, Yakazara HD (1920 x 1080). Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kuzviisa mukutarisa mode kana iwe uchida kuona zvakanaka mavhidhiyo eYouTube kana chero bhaisikopo.
Ndiye here ine yakanakisa processor pane iyo rondedzero, saka ichokwadi sarudzo huru kana iwe uchitsvaga kuita kwakanaka uye unakirwe ne2-in-1 inoshandurwa laptop.
Iyo Lenovo Yoga yakati rerukei kupfuura mamwe malaptop, asi haisati yakwanisa kuenderana neChromebook yatinoongorora pazasi panyaya iyoyo. Iyo ine simba kupfuura malaptops atakatsanangura mundima dzakapfuura uye, kunyangwe iyo yekupeta skrini ingaite seyakagadzirwa, inonzi inoshanda nemazvo nekuda kwekuti. kuva tactile. Chaizvoizvo iyi modhi ine kushandiswa kwakafanana nePackard Bell EasyNote, asi iine mamwe maficha epamusoro.
Iwo akanakisa akachipa malaptop maererano nekushandisa kwawo
15,6 "HD skrini 1366x768 pixels
AMD A6-9225 processor, DualCore 2.6GHz kusvika ku3GHz, 1MB
CHIKAMU CHINONHU INTEL CORE.I5 DUAL-CORE PROCESSOR
KUPEDZA RETINA SCREEN
LG giramu 17Z990-V -...
Ultra-mwenje, inorema 1340 g chete uye hupenyu hwayo hwebhatiri hunosvika maawa 19.5, LG giramu ndiyo inonyanya kufarirwa 17 "laptop ...
Windows 10 Edhisheni Yepamba (64bit RS3) yekushanda kwakapfava
Inowedzera ndangariro, 512 GB SSD seyakajairwa ine imwe slot yekuwedzera kusvika ku2 TB; 8 GB RAM ndangariro ine ...
12.3-inch inobata skrini (2736x1824 pixels)
14 "skrini, YakazaraHD 1920x1080 pixels IPS
AMD Ryzen 5 2500U processor, Quadcore 2.5GHz inosvika ku3.4GHz
Zvinokurudzirwa usati watenga
Mushure megwara rakajairwa kune akanakisa mutengo laptops, unogona kufarira chimwe chinhu chakanyanya kujeka. Muchiitiko ichi haufanirwe kunetseka, isu tine akati wandei kuenzanisa ayo achave anonakidza kwauri.
Best laptop quality mutengo. Kuenzanisa kunopedza zvishoma tichienzanisa zvakanyanya kunaka uye mutengo wemamwe mamodheru. Kufunga kana iwe uchida kuwana zvakanyanya kubva pamari yako.
Kubhejera malaptop. Kune avo vashandisi vanoda kutenga laptop yekutamba mitambo. Isu takaisa vatambi vepamusoro mune zvese specs uye mutengo kuti iwe ugone kuwana zvakanyanya kubva mumifananidzo uye kuita.
Best laptop brands. Iwe uchaona kuti mhando dzese dzakabatanidzwa pano dzinozivikanwa uye nekudaro havasi Chinese. Iwe unogona kuona kuenzanisa kwakazara kana iwe uchida ruzivo rwuri nani mune izvi. Isu tinopa chiono chakakwana ayo ari mabhureki aunogona kuvimba nawo. Ndizvo zvimwe chete zvatinoenzanisa papeji yedu zvakachipa malaptop.
Nekuuya kukuru kwe Windows 10, malaptops ari kusimuka zvakare. Asi ichi hachisi chikonzero chega chekubudirira uku, ivo vakakonzerawo kukurumbira kweUltrabooks uye kuwedzera kweviri-mu-imwe mahybrids anoshanda se laptop uye sehwendefa. Malaptops akachipa ari kuwana pasi pamusoro peChromebooks nekuda kwemhando dzakaita seHP Pavilion x2. Zvichakadaro, malaptops ane simba rakakwana rekutamba mitambo ari kuonawo maitiro avo achikura uye zvinoita sekunge anozove nyore kutsiva akanaka emakomputa edu edesktop.
Nezvakawanda sarudzo dziripo, kusarudza yakanakisa laptop kune zvaunoda kuri kuramba kuchiomaNdicho chikonzero nei zvakakosha kuti, chekutanga, iwe usarudze zvauchaita nazvo.
Kana iwe uchida kukurumidza uye nyore kusarudza iyo laptop inonyatsoenderana nezvido zvako, isu tinokurudzira izvozvo tarisa pane ino peji rewebhu.
Vaya vashandisi vanoenda mushure mekukurumidza bhutsu nguva uye kureruka-huremu komputa nekuti ivo vanoda kufamba nayo vane chokwadi chekufadzwa ne Ultrabook.. MaGamers, kune rumwe rutivi, achasarudza malaptops akachinjirwa kune avo anoda magirafu uye zvinodiwa kugadzirisa, uye avo vanoda chishandiso chinopa kuchinjika, vanosarudza maviri-mu-imwe hybrid.
Pakutanga, zvingaite sezvinorema - nezvese izvo sarudzo - asi chinangwa chedu ndechekukubatsira kuti uwane yakanakisa laptop chero zvaunoda. Titende kana tikakuudza kuti kune laptop yakakunakira iwe. Negwaro iri, haungoriwana chete, asi iwe unenge uine 100% chokwadi chekutenga kwako.
Laptops kuenzanisa: yekupedzisira mhedzisiro
Ongororo dzatakaita dzakaita kuti tisarudze vahwina vatatu pakati pemalaptops gumi akaongororwaAya ndiwo matatu mamodheru atinosanganisa mune iyi laptop kuenzanisa.
El kutanga classified, muhwina weGoridhe Mubairo, ndiye HP Mhanje x360 de 13,3 inches. Laptop iyi ine Intel Core i7 processor ine simba uye 256GB yeSSD - inokwidziridzwa kusvika 512 GB -. Pamusoro pezvo, inoshanda neWindows 10, ine kuzvitonga kunosvika maawa mapfumbamwe nemaminitsi makumi maviri nemasere uye inorema 9 kg chete.Sikirini yayo yakanaka kwazvo, ine resolution yekubva ku28 x 1,3 pixels uye inosvika 1920 x 1080 mukufamba.
HP Shanje x360 13-ar0000ns ...
Ichokwadi kuti 13,3-inch saizi haina yakakura skrini pamusika, asi inoigadzira nekugona kwayo. Iyo HP Specter x360 inoratidzira matatu USB 3.0 ports iyo inokupa iwe nekukurumidza kuwana kune ese USB peripherals. Laptop iyi inoenderana neSD uye HDMI makadhi. Iyo inogadzira inopa online foni, chat uye tekinoroji sevhisi, pamwe nesocial media.
El Chechipiri classified uye muhwina weSirivha Mubairo ndiyo nhevedzano Dell Inspiron 5570 de 15 inches. Iyo yekumhanyisa processor yebhuku rino rakanaka, 3,1Ghz, senge yayo basic processor, Intel Core i3, inokupa iwe nekukurumidza mhinduro. Chinonyanya kukwezva nezve laptop iyi ndechekuti iwe unogona kukwidziridza kadhi yemifananidzo kune AMD kadhi yevhidhiyo kana iwe uchida kushanda nepamusoro tsanangudzo magiraidhi. Yayo 1.000 GB yekuchengetedza simba pane hard drive yakakwana uye inokupa yakawanda nzvimbo yemafaira ako emultimedia.
DELL EMC 7 V75G 39,62 masendimita ...
Iyo inoshanda sisitimu, Windows 10, inoshanda zvakanaka. Iine bhatiri rinogara kwenguva refu rinosvika maawa 5 nemaminitsi 45, chokwadi ndechokuti chikamu ichi chinogona kuvandudzwa. Iyo Inspiron 5570 inorema zvishoma kupfuura mukundi wedu, 2.2 kg, izvi, muchikamu, imhaka ye15-inch skrini. Kufanana neHP Envy X360, patakaisa iyo Inspiron kumiyedzo yekupisa, pasi payo yakasvika 37.7 madhigirii ayo, sezvatakambokurukura, haana kugadzikana kana ukaibata pamakumbo ako. Iyo yekutanga skrini resolution ndeye 1920 x 1080 pixels, asi iwe unogona kuisimudzira kune yakakwira resolution, 3840 x 2160 - kana zvakafanana, a 4K kuratidza. Iine maviri USB 3.0 ports uye imwe USB 2.0 port.
Pakupedzisira, the nzvimbo yechitatu uye anohwina mubairo weBronze ndiye Acer Swift 5 de 14 inches. Iyi modhi ine processor kumhanya ye3,4GHz, yakakura kwazvo kune laptop muchikamu ichi. Nechiyero chayo chose cheA-, data redu rekuita rinoratidza kuti processor haisiriyo inochengeta PC iyi iri munzvimbo yechitatu. Iyo yekutanga modhi ine 256GB SSD uye inoshanda sisitimu ndeye Windows 10.
Hupenyu hwayo hwepakati hwebhatiri maawa manomwe nemaminetsi makumi matatu nematanhatu, iri pazasi peavhareji yemalaptops atakaongorora. Mhedziso yekutanga skrini ndeye 7 x 36 pixels, asi inogona kukwidziridzwa kusvika 1920 x 1080. Uyezve, iyo Acer Aspire Swift ine mbiri USB 2560 ports uye imwe USB 1440 port.
Kuenzanisa ndiyo yemhando dzakakurumbira, saka mienzaniso mutengo wakatenderedza € 1.000. Kana iwe uine bhajeti rakaomarara, ona yedu kuenzanisa mhando-mutengo laptops kana yedu zvakachipa laptop wongororo kuwana zvakachipa.
Kuti tipedze nekuenzanisa kwedu kwelaptop, tichatsanangura kuti ndeapi marudzi akasiyana emalaptops kana iwe uchida kuwedzera chikamu chimwe nechimwe zvishoma sezvo isu tine zvinyorwa zvine hukama.
Sezvakangoita kumwe kutenga kukuru, paunenge uchifunga kutora laptop kusvika iyo yekupedzisira euro yaverengeka. Ichi chishandiso chinogara makore mashoma, saka isu tinokurudzira kuti utarise gwara redu kune akanakisa laptops usati waita chero sarudzo.
Makore mashoma apfuura kwaingova nemalaptops ekutandara uye malaptop ekushanda. Nhasi, pane kudaro, sarudzo dzinoverengeka dzechikamu chimwe nechimwe. Ngatitangei nezvinokosha:
Aya malaptops akanyanya zvishandiso zvinofanirwa kusangana nehumwe hunhu hwekutetepa, kureruka, simba uye saizi yakagadzwa neIntel processor, mukuedza kubatsira vakavimbika Windows laptop vagadziri vanokwikwidza neApple's 13-inch MacBook Air.
Kuti Ultrabook laptop itengeswe saizvozvo, inofanirwa kusangana neyakaomarara yakatarwa neIntel. Inofanirwa kuve yakatetepa, haigone kuve yakakora (kana yakavharwa) kupfuura 20 mm ye 13.3-inch skrini kana 23 mm ye 14-inch kana yakakura skrini. Uye zvakare, inofanirwa kuve nehupenyu hwebhatiri kwemaawa matanhatu kana uri kutamba yakakwira tsanangudzo vhidhiyo kana mapfumbamwe kana isina basa.
Tarisa uone iyo yakachipa ultrabooks kuenzanisa izvo zvatinazvo.
Haikwanise kutora masekondi anopfuura matatu kuti Ultrabook ibude muhubernation. Aya malaptops anowanzo ane solid state hard drive uye maficha senge mirairo yezwi uye yekubata skrini. Ultrabooks akagadzirwa aine kutakurika uye kuita mundangariro, asi ari mutengo wepamusoro, kazhinji kutanga pamadhora mazana mapfumbamwe.
Mhedzisiro yave yakati Malaptop emhando yepamusoro asina chekuitira godo emhando yepamusoro Apple laptops. Ultrabooks malaptops akatenderedza 2 masendimita mukobvu, ane hupenyu hurefu hwebhatiri uye kuratidzwa kwakapinza, seDell XPS 13 kana Asus Zenbook.
Iyo Lenovo Yoga (2021) haingori yakaonda zvinoshamisa uye yakareruka laptop, ndeye. inochinja zvachose padanho rekugadzira. Kukwirisa 13,9-inch skrini mune 11-inch furemu hachisi chinhu chidiki, asi Lenovo yaitawo chishamiso chekugadzira moniti isina mupendero ungangoita. Iyo Yoga 910 zvakare ine simba kwazvo, yakakanuka laptop ine mutengo unodhura unokurudzirwa. Pamusoro peizvi zvose tinozviona se Ultrabook yakanakisisa.
Laptop yemitambo ndizvo chaizvo zvaunofunga - PC yechokwadi vhidhiyo mutambo mafeni. Muchidimbu, haashandiswe kutamba Candy Crush kana Angry Shiri, asi kutamba mitambo yePC inorema chaizvo inoda purosesa yepamusoro, 8GB kusvika 16GB ye RAM, shoma ye1 TB yekuchengetedza uye kadhi remifananidzo. chinova ndicho chinonyanya kukosha. MaLaptops emitambo anowanzo wedzera masikweya uye kuvaka kwawo kwakasimba kupfuura mamwe malaptop, uye skrini yavo inowanzo gadziridzwa.
Unogona kuona yedu kuongororwa kweakanakisa emitambo laptops.
Laptops yekutamba havafaniri kuva vatete kana kureruka, sezvo kazhinji vatambi vanoashandisa pane desktop komputa. Laptop yekutamba inokutendera kuti utambe mitambo yakafanana nekombuta yepadesktop, asi nekunakirwa kwayo nekuti inotakurika zvakakwana kubva kune imwe kamuri kuenda kune imwe kana kutambira kumba kweshamwari.
Munguva pfupi yapfuura, malaptop emitambo akaita kufambira mberi kunoshamisa kuyedza kubata vamwe vavo padesktop. Mupfungwa iyi, zvinoita sekunge mhedziso ine musoro yekushanduka-shanduka ndeyekutanga kusanganisira zvidimbu zvematafura mumalaptops emitambo. Uyu muenzaniso ndewe ine simba rinoshamisa 15,6-inch laptop, ine yakazara-saizi desktop processor uye yepamusoro-ye-iyo-mutsara nhare GPU. iripo. Iwe unogona kufunga kuti musanganiswa uyu ungagadzira hombe laptop, asi iyi inokwanisa kurongedza zvese mumuviri mudiki.
Laptops yeVadzidzi uye Basa
Malaptop ebhizinesi akafanana neyechinyakare chinangwa malaptops anokurukurwa mune zvimwe zvinyorwa, asi ndizvo yakavakirwa kumhando yepamusoro, zvikamu zvadzo zvinogara zvakanyanya uye zvinowanzotengeswa newaranti yakareba uye yakazara.. Iwe haufanirwe kutsiva laptop yako kune bhizinesi makore ese nekuti yapera.
Pachiitiko ichi tinokurudzira mudzidzi notebook guide.
Aya marudzi emalaptops akagadzirwa aine mashandiro awo mupfungwa, aine quad-core processors ayo anogona nyore kubata akati wandei mabasa panguva imwe chete sezvo uchifanirwa kumhanyisa software yese inodiwa kuita basa rako, pasina komputa inodzika. Aya malaptops kazhinji haana makadhi makuru emifananidzo, asi anogona kuwedzerwa kana basa rako richisanganisira mifananidzo kana kugadziridzwa kwevhidhiyo.
Iyo HP Pavilion 14-ce2014ns ingangoita seMacBook Air munzira dzakawanda, asi muchina uri nani munzira dzakawanda. Yakatetepa, yakareruka, uye neimwe nzira inoyevedza kutenda kumuviri wayo wealuminium. Mukuwedzera, iyi laptop ine zvakare Yakakwira resolution Yakazara HD kuratidza, Intel Core i7 CPU uye 1TB yekuchengetedza HDD sesarudzo. Nekudaro, chinonyanya kushamisa ndechekuti iwe unogona kuwana zvese izvi kunosvika mazana masere emadhora, izvo zvinoita kuti ive imwe yeakanakisa malaptop kana uine bhajeti remudzidzi.
Yakagadzirirwa kungoita basa chete, saka zita ravo, Aya mabhuku anowanzo gobvu ane chinhu chimwe chete mupfungwa: kubereka. Vatengesi vanowanzo shongedza aya mayunitsi nehunyanzvi-giredhi maGPU, akadai seNvidia Quadro akatevedzana kana iyo AMD FirePro mutsara.
Mamwe maitiro ayo ndea akasiyana-siyana madoko uye nyore kuwana kune vemukati pane mamwe malaptop evaraidzo. Tisingataure zvakawanda zvenhaka, seTrackPoint cursors, uye hardware-level chengetedzo sarudzo, senge zvigunwe scanner. Semienzaniso tinogona kutaura iyo Lenovo FungaPad X1 Carbon uye iyo HP ZBook 14.
Iyo Lenovo Ideapad 330, nekuda kweiyo understated aesthetics uye yakasimba, yakaoma dhizaini, ndizvo chaizvo zvese zvaunoda kubva kune mobile workstation. Uyezve, inopa nyanzvi chidzitiro chekugadzirisa, hupenyu hurefu hwebhatiri, uye yakasimba, yakavimbika kuita.
Tichifunga kuti inodhura kubva ku900 euros, zvakakodzera kubhadhara iyo yekuwedzera kune zvese zvainopa kune nyanzvi dzinoshanda kunze kwehofisi.
Malaptops maviri-mu-imwe (mahybrids)
Kana iwe uri mumwe weavo vanosanganisa kushandiswa kwelaptop neiyo piritsi, zvingangoita kuti hybrid mudziyo ndiyo yakakunakira. Inogoneswa neaviri-kushandisa sisitimu yekushandisa, Microsoft's Windows 8Midziyo iyi inogona kunge iri muchimiro chemapiritsi ayo zvishongedzo zvinogona kusungirirwa kuita semalaptops, kana anogona kunge ari muchimiro chelaptop inotora fomu repiritsi kana yakavharirwa kubva pane keyboard. Unogona kuona heino muenzaniso wedu 2-in-1 inoshandurwa zvinyorwa kana iwe uchifarira aya mamodheru.
Ehe saizvozvo, iyo pfungwa ndeyekupa mudziyo unogona kushanda zvinobudirira zvese sehwendefa uye selaptop, kuitira kuti pasava nemidziyo yakawanda yakapoteredza imba. Kuunza michina iyi kumusika kwanga kusiri nyore, asi muenzaniso wakajeka wekugona kwavo ndeyeMicrosoft's Surface Pro 3.
Iyo HP Specter x360 13 haisiriyo chete inoshamisa uye inoshanda zvakasiyana-siyana kubva kuHP brand kusvika parizvino, iri. iyo inonyanya kumanikidza hybrid laptop pamusika. Mushure memakore ekunatsa, iyi piritsi nyowani yeHybrid kubva kuHP yakagadziridzwa zvakakosha, senge hombe skrini kana yepamusoro resolution. Uye zvakare, zvimwe zvidiki zvidiki zvakagadziridzwa, senge hinge kana rudzi rwechivharo, kuita iyo HP Specter yakanyanya kugadzikana uye nyore kushandisa.
Iwe unozoona laptop yemitambo paunongoiona: hukuru hukuru, marambi anopenya, mapikicha emotokari, uye mafeni anotenderera. Kunyangwe Nekuda kwekuonekwa kweakatetepa, akareruka uye akanyanya kunaka modhi, seRazer Blade kana iyo MSI GS60 Ghost Pro, iyi paradigm yave kutanga kuchinja..
Kudzvinyirira kubatana uku Iwe une kuenzanisa kwakazara pamalaptop ekutamba (kutamba).
Kazhinji kutaura, malaptop emitambo ari akashongedzerwa neazvino nharembozha GPUs kubva kuNvidia uye AMD kukwanisa kutamba mitambo ichangoburwa uyewo kana uchitamba nekombiyuta yepakombiyuta (Kune mamwe mamodheru anogona kutsiva kombiyuta yepakombiyuta).
General Chinangwa Laptops
Iyi yekupedzisira mhando yelaptop yakaoma kurongedza. Iwo machina achiri kutevedzera zviyero zvakatarwa makumi emakore apfuura einofanirwa kunge iri laptop, kunyangwe yakanatswa. Tichifunga nezvese izvo musika welaptop wakazvipa wega, kazhinji ayo ari muchikamu ichi anoonekwa seakachipa kana epakati-renji makomputa.
Aya malaptops anosiyana muhukuru hwescreen kubva pa11 kusvika 17 inches uye kazhinji haana akawanda maficha anonamira kunze kweawo epurasitiki casings. Iwo makombiyuta kukwanisa kuita mabasa emazuva ose asi vanoperevedza kana wava nezvinodiwa zvakawanda. Ndinotenda izvozvo iyi infographic Zvichakubatsira iwe zvishoma kuona zvese zvakanyanya graphically.
Muna 2014 iyo 13-inch MacBook Pro ine nharo yaive yakanakisa laptop yakamboburitswa neApple. Iyo 2021 modhi yakatokurumidza uye inopa hupenyu hurefu hwebhatiri. Kunze kweiyo yemukati yekuvandudza, iyo 2021 13-inch MacBook Pro yakagara nhaka ichangoburwa Force Bata trackpad. Zvichida Apple haina kumira mushe kune yayo mashandisirwo ebhizinesi, asi kuwana Mac inoyevedza kwazvo kana iwe ukafunga nezve software yainopa uye zvigadziriso zvayo.
Chromebooks ndeimwe yemalaptops madiki uye akareruka pamusikaAsi ivo havana simba uye kugona kuchengetedza kwechinyakare manotsi. Panzvimbo peWindows kana Macintosh sisitimu yekushandisa, maChromebook anomhanya paGoogle Chrome OS, yakagadzirirwa kubhurawuza painternet uye zvimwe zvidiki. Kazhinji hard drive yavo idiki kwazvo - yakatenderedza 16GB - iyo skrini inowanzoita 11 inches, uye ivo vanowanzo ngova ne USB port imwe chete.
Tine ongororo yakakwana yekuenzanisa ye Chromebooks semalaptop madiki akanakisa.
Nekudaro, ivo vanokutendera iwe kuchengeta mafoto, mavhidhiyo uye mamwe magwaro paGoogle Drive pane pane yako hard drive.. Chiratidziro chayo chinowanzoita 1366 x 768 pixels, inokwana kusefa paInternet uye kuona bhaisikopo nguva nenguva. Zvakare, iwe unogona kugara uchibatanidza seti ye USB kuti uwedzere kubatana.
Mhedzisiro iyi sisitimu inogona kumhanya pane yakaderera-yekupedzisira hardware, kugadzira Chromebooks yakanakira mabhajeti akasimba kana evadzidzi. Ehe, maChromebook anoshanda zvakanyanya munzvimbo dzine waya isina waya yeinternet, asi Google yanga ichiwedzera mashandiro ayo ekunze nguva pfupi yadarika. Kuti uwane pfungwa yezvavakaita, unogona kutarisa kuDell Chromebook 11 kana iyo Toshiba Chromebook.
Netbooks akafanana Chromebooks mukuti idiki kwazvo, isingadhure, uye yakagadziridzwa kubhurawuza pawebhu uye zvimwe zvishoma. Aya makomputa ekunyorera haana dhiraivha yekuridza maDVD nemaCD. Zvakadaro, Kusiyana neChromebooks, netbooks anowanzo mhanya paWindows operating system, chero chekupedzisira kana kuti kare, iyo vashandisi vakawanda vanoziva nayo.
Unogona kudzvanya pano kuti uone akanakisa akachipa netbooks.
Uyezve, akawanda netbooks, ane awo anobatika touchscreens uye kiyibhodhi, ari pamuganho pakati pemalaptops nemapiritsi. Netbook ilaptop yakanaka kune avo vanoda kushandisa maapplication kutamba mitambo, asi vanosarudza kutaipa nekhibhodi yemuviri.
Zviri nani diki kana hombe?
Chero rudzi rwavo, malaptop Iwo anowanzo 11-17 inches muhukuru. Sarudzo yako yekuti ndeipi saizi yekutenga laptop inofanirwa kubva pazvinhu zviviri izvi: huremu uye saizi yechidzitiro.
Chekutanga pane zvese, saizi yelaptop yako skrini inoreva zvakananga huwandu hwemukati hwainogona kuratidza uye saizi yayo, zviri pachena. Nekudaro, iwe unofanirwa zvakare kuyeuka kuti, Sezvo saizi yechidzitiro ichiwedzera, kugadzirisa kunofanirawo kuwedzera. Iwe haufanirwe kugamuchira chero chinhu chisiri pasi pechisarudzo che 1366 x 768 chegumi kusvika ku10-inch laptops, kana 13 x 1920 ye1080 kusvika 17-inch laptops.
Chechipiri, unofanira kuyeuka izvozvo Kune yese inch yechidzitiro yaunowedzera, huremu hwelaptop huchawedzera neinosvika 0.45 kilos. Ehe, pane zvisizvo, kune akareruka uye akaonda mamodheru anotyora maitiro aya. Zvichida iwe unoda yakapinza uye yakakura skrini pamusika, asi iwe unoda kuitakura mubhegi rako?
Ndezvipi zvinhu zvaunofanira kutarisa?
Sezvinei neakawanda tech gadget, malaptop anowanzo kuuya nenhamba yezvimiro zvaungade kana kusada nekusarudzika. Iwo maficha akanyorwa pazasi ndiwo anofanirwa-kuve, iwo aunofanirwa kutarisa kana uchitenga laptop yako.
USB 3.0- Iyi ndiyo yazvino chiyero mu USB data data tekinoroji. Ita shuwa kuti laptop yako ine imwe yeaya madoko kuitira kuti faira ifambiswe pakati pelaptop yako uye, semuenzaniso, USB 3.0 flash drive inokurumidza.
802.11ac Wi-Fi- Kusvika ikozvino 802.11n yaive yakakurumidza isina waya yeInternet yekubatanidza, asi mugore rapfuura 802.11ac ma routers akaonekwa. Kana ukaronga kushandisa laptop yako kuona mavhidhiyo ekutepfenyura kana kudhawunirodha nhamba huru yemafaira uye zvirimo, iwe unofanirwa kufunga zvakanyanya kusarudza modhi ine iyo mhando yeWi-Fi yekubatanidza.
SD kadhi muverengi-Nekuzivikanwa kweiyo Smartphone kamera yekutora mifananidzo, vazhinji vanogadzira malaptop vatanga kubvisa chimiro ichi kubva kumamodeli avo, zvisinei, kana iwe uri munhu anofarira kutora mafoto, unogona kupotsa muverengi wekadhi reSD.
Bata skriniNepo kunaka kweiyo touchscreen mulaptop kune mubvunzo parizvino, hatimboziva zvichaunzwa neramangwana. Nekudaro, chinhu chinogona kuita kuti seti idhure, saka ongorora zvakanaka kana ichizobatsira usati wafunga.
Mibvunzo yekuzvibvunza iwe usati watenga
Usati wamhanya kunotenga yakanakisa inotaridzika laptop, unofanira kuzvibvunza mibvunzo inotevera. Ivo vachakubatsira iwe kusarudza kuti ndeipi mhando yelaptop yakakunakira.
Chii chauchashandisa iyo laptop kunyanya?
Kana iwe uchizoishandisa pamusoro pezvese kusefa paInternet, kuona mavhidhiyo ekutepfenyura uye kuita nhare dzevhidhiyo nemhuri nguva nenguva, zvirokwazvo unenge uine zvakakwana nekombuta yekushandisa zvakajairika kana zvehupfumi. Unoda kutamba here? Hezvo une mhinduro. Iwe unofamba zvakanyanya uye iwe unoda yakatetepa uye yakareruka laptop, edza Ultrabook. Kupindura mubvunzo uyu kunogara kuchikunongedzera munzira kwayo.
Iwe unofarira zvakadini nezvekugadzira?
Kune malaptops emhando dzese, brands, mienzaniso uye hukuru - tisingatauri zvidimbu zvepende kana zvinhu. Kana ukada kunyomba dhizaini yakashata yemalaptops aunoona akakupoteredza, ungangove unongoda komputa ine kesi yealuminium, kana purasitiki yakapfava. Asi chenjera, dhizaini inowanzo kudhura.
Yakawanda sei yaunogona kana iwe yaunoda kushandisa?
Mukupedzisira, iyi inofanirwa kunge iri yako huru barometer paunenge uchifunga kuti ndeipi laptop yekutenga, haufanirwe kushandisa yakawanda kupfuura yaunokwanisa. Bhajeti yako ichataura kuti ndeipi chikamu chelaptop yaunotenga.
Kutsvaga laptop yakachipa? Tiudze kuti unoda kushandisa marii
uye tinokuratidza sarudzo dzakanakisisa
Iwe unogona kunge usina kuzviziva, asi iyo laptop yanga iinesu kwemakore makumi matatu, kunyange mumazuva ayo ekutanga yakanga iri zvishoma kudarika tapureta. Kwemakumi emakore, echinyakare desktop makomputa akapa simba rakawanda rekombuta, hukuru hwekuchengetedza, uye vatariri vari nani nemutengo wakaderera. Pakati pema30, zvakanga zvakajairika kuva nekombiyuta yepakombiyuta, asi dzimwe mhuri dzakatanga kuona zvakanakira kuva nelaptop.
Nekufamba kwenguva, iyo Internet yakashanduka kubva kudhiya-up modem kuenda kune isina waya ma routers atinawo iye zvino uye, zvakafanana, malaptop anga ari kuvandudzwa kuti asangane nezvinodiwa nevashandisi vaifanira kufamba nemakomputa avo. Kamwe gadget yevemabhizinesi, mabhanga nemauto, nhasi yave chishandiso chakakosha kune wese munhu.
Sezvo kutakurika ndiko kukosha kukuru kwelaptop, kana uchiongorora kuti ndeipi komputa yekutenga, iwe unofanirwa kunyatso kutarisisa kukura kwayo uye uremu., pasina kukanganwa processor yayo uye kugona kwayo kwendangariro. Kunyangwe malaptop emazuvano asingacharemi kupfuura 9 kilos senge ekare, unogona kuona mutsauko uripo pakati pe2.72 kg modhi uye 1.84 imwe. Kana iwe uri mudzidzi uye uchironga kuendesa laptop yako kukirasi, uchafanirwa kuitakura mubhegi kana bhegi uye unozotenda zvechokwadi kuti idiki, rakareruka modhi. Asi, nerumwe rutivi, kana iwe uri injinjiniya inonzwika uye uchirekodha konzati mhenyu yebhendi remimhanzi, chauchabvunza komputa yako kuve nesimba sezvinobvira.
Kune akawanda akasiyana marudzi emalaptops. Unogona kushandisa mazana mashoma emaeuro pane yekutanga laptop kana zviuru zvakati wandei pane yepamusoro-yekupedzisira mutambo welaptop. Nevamwe iwe unogona kungosefa paInternet uye kunyora maemail, nepo vamwe vachikwanisa kumhanyisa vhidhiyo uye mafoto ekugadzirisa zvirongwa pasina dambudziko. Mhando yelaptop yaunosarudza inofanirwa kuenderana nemabasa aunoronga kuita nawo. Unoida here kuti ishande? Iwe unoda kuona mafirimu kana ako aunofarira TV anoratidza pairi? Iwe uri munhu wekugadzira kana iwe unofarira mitambo yemavhidhiyo? Mukuenzanisa kwelaptop iyi takaongorora mhando dzakanakisa pamusika. Kana iwe uchida kudzika zvakadzika, unogona kuverenga zvinyorwa zvedu pamalaptops.
Ndeipi yakanakisa laptop mukuenzanisa uku?
Mhinduro kumubvunzo uyu haisi nyore uye haina chekuita nemalaptops atakaisa mutafura yedu. Laptop yakanakisa ndiyo inosangana nezvinodiwa zvauri kutsvaga uye izvo hazvifanirwe kupindirana neizvo zvemumwe munhu.
Paunenge uchitsvaga yakareruka pamusika kuti ufambe nayo kwese kwese, mumwe mushandisi anogona kunge achitsvaga zvakapesana.
Nechikonzero ichi, mukuenzanisa kwedu kwelaptop takaedza kuvhara zvinodiwa nevateereri vese, kubheja pane yakanakisa modhi muchikamu chimwe nechimwe maererano nemutengo wayo wemhando.
Kana iwe usingazive kuti ndeipi komputa yekutenga, tisiye mhinduro uye isu tichakubatsira iwe kusarudza iyo inonyatsoenderana nezvido zvako.
Iyo yakanakira laptop yako inotsamira zvachose pane izvo zvaunoda, yezvauri kuzoishandisa. Ndicho chikonzero icho chinyorwa chinorayirwa nemutengo uye kwete ne "mhando".
Kana iwe uchitsvaga laptop yekushandisa nguva nenguva (sekutarisa email yako, kusefa pawebhu, kugadzirisa ako masocial network, gadzirisa mafoto, tarisa Netflix kana kuita rimwe basa rako neMicrosoft Office kana Google Docs, usanetsekane neChromebooks. ), Ini ndinokurudzira zvikuru kuti utarise Chromebook. Tarisa vari kumusoro chegwaro iri. Kana zvakadaro, iwe uchiomerera pakutenga Windows laptop, kana iwe uchida chimwe chinhu chine simba, unogona kusarudza imwe yemakomputa yatakakurudzira pakutanga.
Muchinyorwa chimwe chete ichi iwe uchawana izvo zvine kukosha kwakanyanya kwemari. Zvakare kana iwe ukatarisa pawebhu zvishoma uchishandisa iyo navigation menyu uye nevamwe uchaona kuti isu tinewo maenzaniso uye zvimwe zvinyorwa zvakananga zvichienderana nerudzi rwelaptop yaunoda kutenga. Iwe unogona kuda kuona akanakisa emitambo laptops (yekutamba), kana yakanakisa laptop yebasa, nezvimwe.
Sezvauri kuona kubva pane iyo rondedzero, ini ndichanyatso kujekesa newe. Ese malaptop auchawana pazasi maWindows makomputa. Uye, kutaura chokwadi, ndawedzera iwo maWindows modhi andinovenga zvishoma. Haisi iyo Windows laptops yakaipa, asi kuti ini ndinowanzo shandisa Chromebook inogona kushandiswa kune mamwe mabasa uye, kazhinji, iwo akachipa (sezvauri kuona). Zvinoenda pasina kutaura kuti Apple Macbooks haina nzvimbo mugwaro iri 🙂
1 Yakanakisa yakachipa laptops
1.1 Madhiri Anhasi paMalaptop Akachipa
1.2.1 Laptops zvinoenderana nemutengo
1.2.2 Laptops ne processor
1.2.3 Laptops nemhando
1.2.4 Laptops nemhando
1.2.5 Laptops zvinoenderana nescreen
1.2.6 Laptops maererano nekushandiswa kwaunoda kupa
1.3 Iwo akanakisa akachipa malaptop e2021
1.4 Iwo akanakisa akachipa malaptop maererano nekushandisa kwawo
1.5 Zvinokurudzirwa usati watenga
1.6 Laptops kuenzanisa: yekupedzisira mhedzisiro
1.7 Mhando dzeLaptops
1.7.2 Laptops yekutamba
1.7.3 Laptops yeVadzidzi uye Basa
1.7.4 Zviteshi zvebasa
1.7.5 Malaptops maviri-mu-imwe (mahybrids)
1.7.6 Kubhejera malaptop
1.7.7 General Chinangwa Laptops
1.8 Zviri nani diki kana hombe?
1.9 Ndezvipi zvinhu zvaunofanira kutarisa?
1.10 Mibvunzo yekuzvibvunza iwe usati watenga
1.10.1 Chii chauchashandisa iyo laptop kunyanya?
1.10.2 Iwe unofarira zvakadini nezvekugadzira?
1.10.3 Yakawanda sei yaunogona kana iwe yaunoda kushandisa?
1.11 Takakoshesa chii?
1.12 Ndeipi yakanakisa laptop mukuenzanisa uku?
1.13 Kugumisa kwekupedzisira
Cyber ​​​​Monday laptops